Hubi in Sports Car aysan ka Fleet Or baabuurka kirada
Sidee Si aad u ogaato haddii gaariga uu soo shil xun
Talooyin waxyaabo aad u hubiso intaadan gadan Your Next Vehicle isticmaalay
Gadashada baabuur loo isticmaalay uu noqon karaa mid howl culus aya hortaala. Waxaa jira arimo dhowr ah oo aad naftaada ka hubin kartaa si loo xaqiijiyo in aad helayso gaari wanaagsan oo tayo fiican leh. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay si aad u hubiso marka aad gadaneyso gaari loo isticmaalo waa saliid kumbyuutarradeedu engine kiiska. In this post aan dabooli doonaa sida loo hubiyo iyo waxa la raadinayo.
Waxa aad marka hore waxaan jeclaan si aad u hubiso marka eego gaari loo yahay saliidda engine ah. Mid ka mid ah wax aan jeclaa in la sameeyo waa ka hor tag oo waxaad ku fadhiisan gaariga gudaha iyo raadiyo saliid sticker isbedelka la soo dhaafay ka shirkad sumcad isbedel saliid. Fiiri taariikhda iyo masaafada in la bedelay iyo sidoo kale eegaan masaafada in odometer waxaa hadda akhriska. Hubi in aanay ee la soo dhaafay sababo la xiriira labada ah masaafada iyo taariikhda. Sidoo kale iska hubi in la hubiyo in saliidda ku qoran yahay sticker ah kulan miisaan la mid ah oo saliid ah ayaa lagu talinayaa in ay soo saaraha. Inta badan waa ay fududahay si loo ogaado waxa uu yahay miisaanka saxda ah ee saliidda oo ay daboosho raadineynay. Saarayaasha intooda badan waxa ay ku tax waxaa kiiska kumbyuutarradeedu saliid ka dheregtaan furka ama ay leeyihiin warqad qaar ka mid ah halkaas oo ay daboosho in siinayaa macluumaadka.
Sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad weydiiso milkiilaha haddii ay la isticmaalayo saliidda synthetic ama caadiga ah. Sababtu waxa weeye in mar gaari uu saliid synthetic loo isticmaalo haddii ay dhacdo kumbyuutarradeedu waa in aad u malaynayaa in ay sii wadaan la isticmaalayo synthetic si looga fogaado dhibaato sifaynta. Qaar ka mid ah baabuurta cusub hadda soo saliid synthetic in kiiska kumbyuutarradeedu ka warshad ka, oo waxaa jiri doona warqad ku daboosho ama taageerada muhimka ah oo kuu sheegaysa in gaariga oo keliya ayaa saliid synthetic loo isticmaali karaa waxa ku jira. Mid ka mid ah wax ku saabsan in la xasuusto synthetics waa in aad ku kici doona si weyn dheeraad ah marka aad isbedel saliidda. Isbedel saliid ah oo saliid lagu joogto ah ku kici doona $20 si ay u $25, halka isbedelka saliid ah la synthetics ku kici doona $50 si ay u $80 iyadoo ku xiran inta saliid kiiska kumbyuutarradeedu waxay u qabataa.
Next, aad rabto in aad ka hor tago oo la furo surta. Meel ku daraa kiiska ul kumbyuutarradeedu engine ah. Sida caadiga ah ulaha maquufin waxay leeyihiin inaanu huruud ah ama buro,. Hayso calal ah aad la. Ka hor taga oo u jiid ul maquufin ah oo tirtiraynaa. Markaas dib ul maquufin ah oo mar kale ay ka soo baxdo iyo hubi in ay arkaan in saliidda waa kala duwan ee lagula talinayaa. Dipsticks waxay leeyihiin nooca qaar ka mid ah Calaamadayn iyaga ku tilmaamaysa kala duwan ee hawlgalka nabad ah oo saliid kiiska kumbyuutarradeedu. Ku qor qaar ka mid ah saliidda Farahaaga, ama haddii calal ee aad leedahay waa cad, tago ka hor eegno fiican ee. Waa maxay midabkeedu? On engine ah in uu leeyahay 150 kun oo mayl ama ka yar, waxay leeyihiin waa in ugu yaraan waxoogaa ka mid ah muuqaalka ah oo dahab ah inay. Haddii ay tahay wax yar wasakh ah waa hagaag, gaar ahaan haddii ay ku dhow yahay inuu mar mar in la beddelo saliidda.
Next, urin saliidda ( Waan ogahay in codadka lagu qoslo, laakiin i aamini). Waa in aan lahayn ur la gubo si. Waa in aan lahayn ur gaas, waxa uu ka mid ahaan. Haddii ur sida gaaska cayriin, ka dibna waxaa dhib ka haysto nidaamka shidaalka oo la daadinta yaabaa shidaal cayriin galay crankcase ah. Inta badan inkastoo qabadsiin lahaa iftiin engine jeeg.
Hubinta saliidda engine waa mid ka mid ah waxyaabo badan oo ay tahay in la baaro si loo hubiyo in aad iibsato gaari oo tayo wanaagsan. Si aad wax badan oo ku saabsan wax si aad u hubiso iyo hababka ugu fiican ee u soo qaado fiirin bartaan, booqo website @ KNWAutobody.com
Post Tani waxaa la abuuray by mid ka mid ah milkiilayaasha iyo waxa uu ogol yahay isticmaalka iyo lacagta waxaa ka mid ah ay akhristayaasha. Waxaan aanan helin wax magdhow ka xulafadii kale ee this site for qoraal this post.
Tags: Hubinta saliidda engine